Sweatshirts clothes Dharka shaqeynta • Xirfadlaha kumbuyuutarka ee P&M
Sweatshirtsmidig xiga surwaal i Funaanadoyihiin aasaaska dharka shaqaalaha ee warshado badan. Noocyo badan oo kala duwan ayaa laga heli karaa kuweenna dukaanka waxay awood u siineysaa xulashada sheyga iyadoo kuxiran ujeedadiisa ama doorbidka isticmaalaha.
Sweatshirts shaqada iyo maalin kasta oo aad naqshadeynta adiga kuu gaar ah
Moodooyinka la bixiyay waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh, oo hawshoodu tahay caabbinta ugu sarreysa ee suurtagalka ah ee hawlgalkeeda iyo ka hortagga xaaladaha cimilada adag.
Sweatshirts waa qalabka aasaasiga ah ee wakiillada warshado badan, oo ay ka mid yihiin. dhismaha, wax soo saarka ama saadka. Waxay ku leeyihiin isticmaalkooda kala duwan guryaha wax ku oolka ah - marka laga reebo kuleylka ka dhanka ah dabaysha ama qabowga, waxay sidoo kale u oggolaanayaan xorriyad dhaqdhaqaaq ka badan jaakadaha, iyagoo ilaalinaya dharka gaarka loo leeyahay.
Waxaan bixinaa moodello dhammaan xilliyada la jaanqaadaya xaaladaha cimilada kala duwan ama boodboodayaasha ku-meelgaarka xilliga gu'ga ama deyrta.
Waxaan ku siinaynaa jaakadaha shaqada qiimo kala duwan iyadoo kuxiran qaabka - laga soo bilaabo aasaasiga aasaasiga ah ee lagu taajiray ujeeddo gaar ah.
Badanaa waxay ka sameysan yihiin polyester, oo bixisa kuleylka kuleylka, iyo sidaas darteed xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee ka badan tan caadiga ah jaakadaha shaqada.
Intaa waxaa dheer, moodooyinka badankood waxay leeyihiin silsilado taagan oo loogu talagalay daboolka kuleylka iyo jeebabka wax ku oolka ah ee leh jiinyeerrada. Waxaan ku siineynaa dharka dhididka midabyo kala duwan, oo leh gacmo dhaadheer iyo gaaban, iyo sidoo kale dabeecad digniin leh walxo milicsi leh
Dharka milicsiga waxay si ku habboon ugu shaqeyn doontaa shaqaalaha waddooyinka, shaqaalaha dhismaha ama kuwa shaqeeya ka dib makhribka.
Shaatiyada shaqada shirkadaha sida madaxa ama Stedman oo ka samaysan dhar u adkaysta isticmaalka degdegga ah.
Si loo ilaaliyo cunsurrada u nugul xoqida, xubno gaar ah oo ilaalin ah ayaa loo tolay moodello la xushay. Sidoo kale, qaababka qaar ayaa lagu hodiyay hawo si loo yareeyo dhididka inta lagu jiro jimicsiga adag.
Moodooyinka badankood waxay leeyihiin waltsooyin raaxo leh oo ku yaal dhexda iyo curcuraha si looga ilaaliyo waxyeellada dharka gaarka ah ama wasakhda.
Iibku waa: jaakadaha dhogorta, jaakadaha shaqada, jaakadaha polypropylene, jaakadaha digniinta, dhididka
Shaatiyada shaqada daabacaadda ayaa aad iyo aad u badan maxaa yeelay waxay u dhigantaa nooc raqiis ah oo xayeysiin ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, tixgeli hab calaamadeyn oo tayo sare leh oo u adkeysanaya waxyeellada, midab luminta iyo dhaqidda heerkulka sare. Taasi waa sababta aan ugu talineyno shaqsiyad adag daabacaadda kumbuyuutarka.
dhididka shaqada raggadhogorta ragga ee dhogorta shaqeysajaakadaha shaqada dhogortajaakadaha shaqadaAllegro shaqada dhididkajaakadaha shaqada caddhididka shaqada haweenkajaakadaha shaqada ee denimjaakadaha shaqada engelbert straussshaararka shaqada julajaakadaha shaqada raggajaakadaha shaqada dahaaranjaakadaha shaqada ka tarjumayafunaanado shaqo olxdhididka dhogortaJaakadaha shaqada dhogorta Allegrofunaanado shaqo goobta: allegro.pljaakadaha shaqada ee jilicsanJaakadaha shaqada cawlanjaakadaha ku shaqeeya dabooljaakadaha shaqada ku daabacanku shaqee dhididka leh daabacaadda 'Allegro'jaakadaha shaqada jiilaalkadhididka diiranshaararka shaqada juladhidid dhudhunshaqada dhididkajaakadaha dhogorta ka shaqeeyadhididka shaqada jabandharka shaqada dhididka